मजदुरले ज्याला नपाएपछि खुल्याे कटारी अस्पतालकाे अनियमितता
काम गर्ने ठेकेदार, हिसाब मिलाउने समिति !
असारमा सकिएको भनेर भुक्ताती लिएको काम भदौ वित्नलाग्दा समेत गरिंदै ।
कटारी । उदयपुरको कटारी नगरपालिकाको कटारी अस्पतालमा निर्माणाधिन म्युजिकल गार्डेन, रेक्टो, रेनोभेसनको काम अहिले पनि जारी छ । प्रदेश नं १ काे सामाजिक विकास मन्त्रालयको ६२ लाखको आयोजनाको काम गत असार मसान्त भित्रमा सकिनुपर्ने भएपनि भदौ जानै लाग्दा समेत काम सकिएको छैन ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उदयपुरका लेखापाल यादब निरौलाले ५५ लाखको कामको मूल्याकंन गरी ५ प्रतिशत धरौटी काटेर ५२ लाख ५० हजार भुक्तानी दिइसकेकाे बताए ।
‘साउन १० गते सम्ममा सक्छौं भनेर नगरपालिका अस्पतालका डाक्टरले प्रमाणित गरेपछि समितिलाई भुक्तानी दियौंं,’ निरौलाले भने ।
हिसाब मिलाउने समिति काम गर्ने ठेकेदार कटारी अस्पतालकाे काम गर्न सुबोध तामाङकाे अध्यक्षतामा समिति गठन गरिएको भएपनि कामचाहिँ ठेकेदार कम्पनी र्यापिड सर्भिस प्रालि बालाजुलाई दिइएकाे छ । समितिबाट हुने काम ठेकेदारलाई दिन नहुने प्रावधान छ ।
प्रालिका सञ्चालक कृष्ण ढकालले भने, ‘हामी त टेण्डर हालेर लो रेटमा काम गर्नेगरी आएका थियौं तर यहाँ आएपछि समिति गठन गरेर काम गर्ने कुरा भयो ।’ ढकालले कटारी नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि लगायतक सरोकारवालाहरुको सहमतिबाट ५० लाखमा काम गरेको बताए ।
समितिले हालसम्म ४० लाख मात्रै दिएको बताउँदै कटारीमा आवश्याक सामग्री नपाइने अन्यत्रबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले घाटा व्यहोर्नुपरेको बताए । जेठ अन्तिमबाट काम थालेको बताउँदै ढकालले पारिवारिक समस्याका कारण पनि काम समयमा नसकिएको बताए ।
काठमाडौंमा काम गरिरहेका बेला कटारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठ र अस्पतालका डाक्टरहरुले आफ्नाे अस्पतालमा पनि काम गर्न आग्रह गरेपछि कटारी आएको पनि ढकालले बताए । ५२ लाख ५० हजार भुक्तानी लिएको समितिले ठेकेदारलाई हालसम्म ४० हजार मात्रै रकम दिएकाे छ ।
समितिका सचिव राजकुमार थापा क्षेत्रीले नगरपालिकाका मेयर र अस्पत्तालका डाक्टरको सल्लाहामा समितिमा बसेको बताए । ‘पैसा फ्रिज हुने भयो समितिमा बसेर सहयोग गर्नुपर्यो भनेपछि बसेका हौं,’ उनले भने ।
५२ लाख ५० हजार भुक्ता गरेको जिल्ला जनस्वास्थ्यले बताईरहँदा समितिले ५० लाखमा प्रालिलाई काम दिएको छ दुई लाखको हिसाबका अलावा अझै पनि ४० लाख दिएर समितिले १० लाख प्रालिलाई दिएको छैन । सचिव थापाले भने, ‘बजारमा हामीले सामान उधारो किनिदिएको चार पाँच लाख तिर्न बाँकी छ ।’
काम नसकी काम सकिएको कागजात बनाउन जिम्मेवार कटारी नगरपालिकाका इन्जिनियर भूपेन्द्र यादबले असार २५ भित्र चेक काटिसक्नुपर्ने भएकाले कामको ८० प्रतिशत प्रगति हेरेर ५ लाख घटाएर भुक्तानी गर्न पास गरिदिएको बताए ।
तर सोही काम गर्ने मजदुरहरुले भने असार मसान्त सम्ममा २० प्रतिशत पनि काम नभएको बताएका छन् । मजदुरले तीन महिनादेखि श्रमको मूल्य पाएका छैनन् । ठेकेदारले पैसा नदिएपछि नै यो रहस्य बाहिर आएको हो ।
कटारी ३ च्याँगाका २५ मजदुरले तीन महिना काम गरेको पैसा नपाएपछि समाजवादी ट्रेड युनियन महासंघका सचिव यज्ञ राईको पहलमा इलाका प्रहरी कार्यालयमा रातिसम्म मजदुरले छलफल गरेका थिए ।
काम गरेको पैसा नपाएपछि सहयोग माग्न प्रहरी कार्यालय परिसरमा रातिसम्म छलफल कुर्दै मजदुरहरु ।
छलफलपछि हाल राईको जिम्मेवारीमा ढकालले पैसा नभएको र आगामी असोज १ गते पैसा निकाल्न मिल्ने सहमतिमा ५ लाख ५७ हजारको चेक थमाइदिएका छन् ।
पैसा नभएको चेक पनि दिन लिन नपाईने भएपनि कटारी अस्पतालका डा. गौरब साहले समेत समितिबाट समेत अझै १० लाख लिन बाँकी भएकाले १ गते सम्ममा पैसा लिन सकिने भन्दै आग्रह गरेपछि लिएको राईले बताए ।
‘पैसा माग्दा जहिले पैसा आको छैन भन्ने पैसा चाहिँ लिइसकेकाे रहेछ, घरायासी सबै समस्या नबताए पैसा नदिने गर्थ्र्यौ,’ मजदुर भक्त तामाङले भने,‘ढकालले पैसा माग्दा झर्को फर्को गर्ने काम मात्रै लगाउने गर्थ्र्यौ ।’
अर्का मजदुर लबकुश माझीले भने, ‘हाम्रो आफ्नै समस्या हुन्छ पैसा आउँछ भनेर काम गरेका हौं तीन महिनासम्म पैसा नदिएपछि हामी मर्दैनौं ।’ एकजना मजदुरको मात्रै ४३ हजारमाथि लिन बाँकी रहेको पाइयाे ।
२५ मजदुरले श्रमको पैसा पाएका छैनन् । असारमा सकिएको भुक्तानी लिएको समितिले ५२ लाख ५० हजार भुक्तान लिएर ठेकेदारलाई ४० लाख दिएका छन् । पुरै काम ५० लाखमा प्रालिले गरिरहेको छ ।
ढकालले राईलाई दिएको पैसा नभएको चेक ।
२ लाख ५० हजार समितिसँग नाफा छ । त्यसमा पनि प्रालिले हाल ४० हजारमात्रै पैसा लिएको छ । समितिले ठेकेदारलाई काम दिएपछि बजारमा रहेको सामानको उधारो समितिले नभई प्रालिले तिर्नुपर्नेमा समितिका सचिव थापाक्षेत्रीले बजारको उधारो तिर्नु बाँकी रहेको बताए ।
समितिले काम गर्दा जनश्रमदान हुनुपर्ने, समिति गठन प्रकृयामा भेला वस्नुपर्ने लगायतका प्रकृया नखुलेको र समितिले ठेकेदारलाई काम दिन नहुनेमा दिएको पाइएकाे छ । असार मसान्तमै काम सकिएको भन्दै भुक्तानी लिएको समितिले अस्पत्तालमा काम भने अझै सकिएको छैन । कामको गुणस्तर त कामै नसकी भुक्तान लिएर बाँडफाँड गरेपछि हेर्ने निकाय नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।
मजदुर निष्काशन तथा मजदुरविरोधी सम्झौताविरुद्ध काठमाडाैंमा प्रदर्शन
६ वटा ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरकाे समस्या हल गर्न माग गर्दै संयुक्त प्रदर्शन गर्ने
प्रदेश २ ले लकडाउनकाे अवधिभर गरिब र मजदुरहरुलाई खाना खुवाउने